Chrome: Madadaalo Badan oo Mashiinnada Raadinta | Martech Zone
Chrome: Madadaalo Badan oo Mashiinnada Raadinta ah
Sabtida, Diisambar 12, 2009 Arbacada, Juun 7, 2017 Douglas Karr
Hal shay oo aan marwalba kahelo qalafsanaanta ayaa ah mashiinka raadinta ama liiska matoorada - iyadoon loo eegin inuu yahay Firefox ama Safari. Waxaan raadiyaa boggeyga inta badan ku filan oo aan badanaa ku daro liiska. Intaa waxaa dheer, had iyo jeer waa wax lagu farxo in la sameeyo waxyaabo ay ka mid yihiin in Bing laga dhigo mashiinkaaga raadinta asalka ah ee 'Chrome' si aad u ilaaliso bahallada la dagaallamaya (I runtii jecel Bing!).
Xitaa aniga ayaa dhisay Ku dar foomka Mashiinka Raadinta Firefox si ay arrimaha u fududeyso. Chrome ma aha wax fudud, uma adeegsanayso qaybta 'AddEngine' ee uu Firefox sameeyo sidaa darteed si fudud uma dhisi kartid xiriiriye. Sidoo kale, ma jiro hoos u dhac ku yimaada xulashada mashiinka raadinta.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira hal muuqaal oo cajiib ah oo leh omnibar… waxaad ku dari kartaa erayga muhiimka ah ee aad dooratay inaad ku darto mashiinka raadinta. Waa tan sida loogu daro mashiinka raadinta:
Ama tag doorbidyada Chrome-ka oo guji maaraynta Mashiinnada Raadinta ama midig u guji Omnibar ka dibna dooro Edit Engines Search.
Kudar magaca mashiinka raadinta ama goobta aad jeceshahay inaad raadiso, eray fure ah oo si fudud aad ku kala soocdo, iyo URL-ka baaritaanka raadinta oo leh% s oo ah ereyga raadinta. Waa kuwan tusaale ChaCha:
Hadda, si fudud ayaan u qori karaa "ChaCha" oo weydiintayda iyo Chrome ayaa si otomaatig ah u qarin doonta URL-ka oo ay u diri doontaa. Tani runti way ka sahlan tahay garaacista hoos u dhaca iyo xulashada mashiinka raadinta. Waxaan hayaa mid kasta oo ka mid ah Mashiinnada Raadinta keyworded… Google, Bing, Yahoo, ChaCha, Blog… oo kaliya isticmaal omnibar si aad dhaqso ugu hesho natiijooyinka! Markaad bilowdo qorista, Chrome wuu dhammeeyaa oo wuxuu bixiyaa macluumaadka raadinta:
Xitaa waad kari kartaa cusboonaysii Xaaladdaada Twitter adoo isticmaalaya omnibar maaddaama Twitter-ka uu leeyahay qaab querystring ah oo lagu soo koobo Tweet. Ama waxaad ku dari kartaa ereyga gaaban ee muhiimka ah si aad ugu raadsato twitter-ka http://search.twitter.com/search?q=%s.
Daah-: ChaCha waa macmiil aniga ah. Waxay heleen natiijooyin aan caadi ahayn, inkasta oo… gaar ahaan markaad raadineyso wax fudud sida cinwaan, lambar taleefan, su'aal aan fiicnayn, ama xitaa kaftan fiican. Waxay leeyihiin bogag aad u adag oo aad u adag oo ku saabsan dadka caanka ah iyo mowduucyada, sidoo kale.